कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य ? - Baikalpikkhabar
कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य ?
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सुरु गरीएका सामाजिक कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुनाले मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आफ्नो बहसमा ल्याएर काम लिन सकिनेछ । व्यापार व्यावसायमा थोरै लगानी गर्दा पनि मनग्गे आर्जन गर्न सकिनेछ भने समयले साथ दिने हुँदा पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिनेछ ।
बिहिबार, १९ चैत, २०७७, बिहानको ०६:२१ बजे